DataNumen: Nhengo dzeMamwe Masangano
musha Nhengo dzeMamwe Masangano
Nhengo dzeMamwe Masangano
DataNumen inopa yakawanda yekutarisisa kune dzimwe nyika kuchinjana uye kubatana. Iine huwandu hwakawanda hwehukama uye kudyidzana nemasangano akakosha emunyika uye epasi rese. Isu tinochengetedza zvakanyanya kusangana padhuze nemasangano akanyorwa pano, asi DataNumen inoshandawo mune dzakasiyana siyana dzimwe nzira uye kudyidzana munzvimbo dze software, zvakajairika, zvakatipoteredza uye zvemagariro kubatana.
Software & Ruzivo Indasitiri Sangano
Iyo Software & Ruzivo Indasitiri Sangano ndeimwe ye most akakosha masangano ekutengeserana eiyo software uye dijitari yezvigadzirwa indasitiri. SIIA inopa mabasa epasirese muhukama hwehurumende, kusimudzira bhizinesi, dzidzo yemakambani uye kuchengetedza kwepfuma kune makambani anotungamira.
Sangano reIndependent Software Vatengesi
Sangano reVanozvimirira Software Vendors (OISV) mubatanidzwa wevanogadzira software, vashambadzi, vanogovana, uye vatengesi vanobatanidza pfungwa dzavo nemazano ekugadzira zvirinani software uye maitiro kune wese munhu. IOISV inoenderana nehunhu hwekuenzana, democracy, kuvimbika, kubatana uye kubatsira vamwe kuzadzisa zvinangwa zvavo.
Software Indasitiri Nyanzvi
Software Indasitiri Nyanzvi ndeimwe yemapoka makuru epasirese anomiririra nhengo dzeindasitiri yesoftware, iine nhengo dzinopfuura mazana maviri nemazana mana munyika makumi mapfumbamwe nematatu.
Sangano reIndependent Software Indasitiri Nyanzvi
AISIP isangano rehunyanzvi revanhu vanoshanda mune yakazvimirira software indasitiri. Most Nhengo dzeAISIP dzinotengesa software uye masevhisi kubva kumawebhusaiti avo, uye vanoedza kupa zvigadzirwa zvakakosha, zvakakosha pavanogadzira mari.
Yekudzidzisa Software Mushandirapamwe
ESC (Educational Software Cooperative) isiri-purofiti mubatanidzwa unounza pamwechete vanogadzira, vaparidzi, vagoveri nevashandisi ve software yekudzidzisa.
Yepasi Pose Dhata Rezvekudzosera Sangano
IPDRA (International Professional Data Recovery Association) yakagadzirirwa kubatsira masangano nevanhu vaive ne lost data nekuvanongedzera kune vanokwanisa, vane ruzivo uye vanozivikanwa Dhata Yekudzosera kambani.